लेटाङमा एकै परिवारका नौ जनालाई कोरोना
विराटनगर, १५ भदौ । लेटाङ नगरपालिकामा एकै परिवारका नौ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विराटनगरको एउटा अस्पताल भर्ना भएर उपचारपछि घर फर्किएका वृद्धको परिवारका नौ जना सदस्यमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
विराट मेडिकल कलेजमा उपचारपछि ८० वर्षीय वृद्ध ३२ साउनमा घर फर्किए थिए । वृद्धलाई पुनः स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
मृगौलाको उपचार नोबेल मेडिकल कलेजमा गरिरहेका ८० वर्षीय वृद्धलाई प्रोष्टेट भएपछि २५ साउनमा विराट मेडिकल कलेजमा शल्यक्रिया गरिएको थियो । शल्यक्रिया पछि ३२ साउनमा घर गएका वृद्धमा पुनः समस्या देखिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको थियो ।
पिसाब रोकिएपछि ९ भदौमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना गरेका थिए । धरानमा जाँच गर्दा उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि परिवारका अन्य सदस्याको जाँच गर्दा नौं पोजेटिभ देखिएको हो । तीन जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । उनीहरू होम आइसोलेशनमा छन् ।
९ भदौमा भर्दा भएका वृद्धको कोरोना जाँच गर्नु अघि चिकित्सकको टोलीले शल्यक्रिया गरेको थियो । पिसाब रोकिएको सात घण्टापछि पुगेका वृद्धको युरोलोजी युनिटका प्रमुख डा. सुधीर सिंहको नेतृत्वमा डा. आवाज काफ्ले र नर्सहरू शारदा शिवा र कविता सुब्बाको टोलीले सतर्कता अपनाएर शल्यक्रिया गरेको थियो । शल्यक्रियापछि जाँच गर्दा वृद्धको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनको अवस्था सुधारउन्मुख छ ।
‘आमाबुबासहित परिवारका नौ जनामा पोजेटिभ रिपोर्ट देखियो,’ शिक्षकसमेत रहेका छोराले भने, ‘अस्पतालबाटै सरेकाे हाे की जस्ताे लाग्छ ।’ संक्रमण देखिएपनि परिवारका कसैलाई लक्षण नदेखिएको उनले बताए ।